QARDHO: Siduu ku baxsaday maxbuus dil ku xukunaa? (daawo) – Radio Daljir
QARDHO: Siduu ku baxsaday maxbuus dil ku xukunaa? (daawo)
Luulyo 6, 2021 6:06 g 0
Taliska ciidamada Asluubta Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay sida uu ku baxsaday maxbuus dil ku xukunaa, hadaba yaa ufududeeyay? sideese ayuu ku baxday? Afhayeenka ciidamada Asluubta PuntlandCabdirisaaq Maxamuud Xirsi (Xarago) ayaa ka waramay.